အသေသတ်ခြင်းကို Stranding: Hideo Kojima ယင်းကို Safe House ကဆမ်ပေါ်တာ Bridges မိတ်ဆက် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom "မရဏကမ်းနားလမ်း: Hideo Kojima ယင်းကို Safe House ကဆမ်ပေါ်တာ Bridges မိတ်ဆက်
သရုပ်ဆောင်-Norman Reedus နေဖြင့်ကစားအဓိကဇာတ်ကောင်မရဏကမ်းနားလမ်းတစ်ပုဂ္ဂလိကနှင့်စိတ်ကြိုက်ကြွင်းသောအရာဧရိယာရှိပါလိမ့်မယ်။
ဂျပန်ဒီဇိုင်နာ Hideo Kojima ဂိမ်း၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနေဆဲအံ့သြစရာအဖြစ်အထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ လောကီသားတို့သည်အမိတ်ဆက်ပြီးနောက် သခွေငျးတရား Strand နှင့်၎င်း၏အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းဂိမ်း၏အဓိကပွဲထုတ်မိတ်ဆက်လူ Kojima Productions ၏ဦးခေါင်းကိုတိုကျိုဂိမ်းပြရန် 2019 မှာကို Safe House ကထံအပ်နှံဗီဒီယိုသစ်တစ်ခုတင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုအပြည့်အစိတ်ကြိုက်တည်နေရာဆမ်ပိုရှည်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြာချိန်ထက်ယူပါလိမ့်မယ်တဲ့ခဲယဉ်းတူးဖော်ရေးသို့မဟုတ်မစ်ရှင်ပြီးနောက်ကြွင်းသောအရာမှခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကစားသမားတွေကိုထိန်းချုပ်မရ ဆမ်ပေါ်တာ Bridgesသို့သော်သူ၏အမူအရာများနှင့်ကင်မရာကိုစီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဝိညာဉျသ။ ဒါဟာရေချိုးခန်းကိုသွားရန်သူ၏အလိုဆန္ဒပြပါနဲ့တူမေးမြန်းချက်လုပ်ဖို့သူရဲကောင်းများ၏ကမ်းနားလမ်းမရဏတားဆီးမည်မဟုတ်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများအများအပြားနှင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ် မူတည်. မတူညီဖြစ်ကြသည်။ အကောင်းတစ်ဦးရေချိုးခန်းပြီးနောက်, ခန္ဓာကိုယ်အရည်ဆမ် ... လက်နက်များတိုးတက်စေရန် crystals သို့ကူးပြောင်းပါလိမ့်မည်သတိပြုပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, သောသော့ချက် Kojima ပါပဲ။
မရဏကမ်းနားလမ်းဗီဒီယိုထဲရှိကို Safe House က
နာမည်ကြီးကို Safe House ရဲ့ခုနှစ်တွင်ဆမ်ပေါ်တာ Bridges လည်း, BB နှင့်အတူအပြန်အလှန်သည်သူ၏အိတ် customize, သူ့မျက်မှန်နဲ့သူ့ဦးထုပ်, တစ်ဦးကျောက်ခေတ်အေး Steve Austin (ယခင် WWE ချန်ပီယံ) ကဲ့သို့သောဘီယာသောက်သုံးခြင်း, ဖန်တစျမြိုးကိုစားစေခြင်းငှါ စာဖတ်သူကနေတစ်ဆင့်ဂီတ play သို့မဟုတ်မော်ကွန်းတင်ပြီးအချက်အလက်များ၏ကြည့်ရှုနေစဉ်, e-mail, နှင့်အခြားမစ်ရှင်အမိန့်ကိုဖတ်ရှုဖို့အမေရိကန် holographic မြေပုံသုံးပါ။ ဖြစ်နိုင်ခြေကဒီအထူးသဖြင့်အရပ်ဌာန၌မြောက်မြားစွာရှိပါသည်။ Hideo Kojima လည်းဆမ်ပူပြင်းတဲ့နွေဦးအတွက် BB နှင့်အတူ bathes ရှိရာအပြင်ဘက်သစ်တစ်ခု sequence ကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက်ဝေဒနာတွေသူ့ကိုအနည်းငယ်သာစကားလုံးများကိုအသံသေးနှင့်တိုးတိုးသို့မဟုတ်မနာသီချင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ mama (မာဂရက် Qualley) ကိုလည်းအချိန်များတွင်အတူတကွရေချိုးနိုင်ပုံရသည်ကိုလည်းသီချင်းများနှင့်အတူသူမ၏သူငယ်၏စောင့်ရှောက်မှုကြာပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသစ်တစ်ခုကျမ်းပိုဒ်ကောင်းတစ်ဦးတစ်နှစ်အသုံးမပြုခင် BB နှင့်အတူပြောတတ်သူကို Cliff (Mads Mikkelsen) ပြသထားတယ်။
Metal Gear အတွက် Solid လိုပဲ, Kojima-san က Monster Energy, ဆန်းသစ်အားကစားဒီဇိုင်နာ Errolson Hugh နှင့် JFRey တစ်ဦးအမေရိကန်စွမ်းအင်သောက်အတိုကောက်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောအဖြစ် Stranding မရဏအတွက်အချို့သောအမှတ်တံဆိပ်မြှင့်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ အမေရိကန်ကွင်းဆက် AMC ၏-Norman Reedus ပြဿနာနှင့်အတူစီးနင်အဘို့အပင်မြှင့်တင်ရေးရှိပါသည်။
သင့်အနေဖြင့်ပုဂ္ဂလိကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ Monster စွမ်းအင်-ရပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းစဉ်အတွင်းအသုံးပြုသောဆိုပါကသင့်ရဲ့သက်လုံကကူညီမည်! #DeathStranding pic.twitter.com/9mKArpjYf0
- Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) စက်တင်ဘာလ 14, 2019
reviews ဒီယခင်အတွက်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် #TGS2019 ဒီနေ့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအခန်းဂိမ်းထဲမှာ featured အဖြစ်ရည်ရွယ်တင်ဆက်လွန်း, ဆမ်ပုဂ္ဂလိကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကျီသည့်အင်္ကျီကဦးဆောင်, ဘာလင်အခြေစိုက်အတိုကောက်အားဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် @erlsn !! pic.twitter.com/3nNvs8jQpB
ပြတော်မူပြီ #TGS2019, #DeathStranding ပြင်သစ်မျက်မှန်အမှတ်တံဆိပ် JFRey အတူလက်တွဲပါရှိပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်ကနေအားလုံးသည်မျက်မှန်လက် JFRey ကဒီဇိုင်းခဲ့ကြတဲ့, သူတို့ထဲကအတော်များများဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်! pic.twitter.com/BhVmtBdHFD
နိုင်ငံတော်သီချင်းဟာ EA ၏မူလအစ Access ကိုနှင့် Access ကိုအပေါ်ယခုရရှိနိုင်
Ubisoft အတွေ့အကြုံ: ပထမဦးဆုံးပြင်သစ်ထုတ်ဝေပဲရစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအပတ် 2019 ၏ပြင်ပမှာကျင်းပပါလိမ့်မည်
beta ကို PS4 အပေါ်စတင်ခဲ့သည် Duty Modern Warfare multiplayer ၏ခေါ်ဆိုမှု
အဓိကလုပ်ငန်းက Android ယခုနှစ်အရှိဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်ရုံအပြည့်အဝများတွင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်